Okooko osisi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Okooko osisi
Esi lekọta tulips mgbe ha na-acha ọkụ, usoro nke ichebe bọlbụ
Ikekwe oge kachasị mma maka oge mmiri ọ bụla bụ oge tulips na-agba. Ọ bụ osisi ndị a magburu onwe ha na ọdịdị ha na-agwa anyị banyere mbido mmiri. Ụdị ọṅụ a dị ka tulips, Achọrọ m ịmụba na oge ọ bụla, nke mere na ndị na-eto ugbo na-emepụta ụzọ iji chekwaa okooko osisi ruo oge ọzọ site na ịchekwa tulips mgbe egwu egwu.
Na-eto eto osisi lily: ezi ihe akuku na ihe omimi iji lekọta
Osisi lily bụ osisi na-enweghị atụ. Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-enwe mmasị na ịma mma ya, ndị ọzọ na-ekwu na osisi dị otú ahụ abụghị ụdị. Otú ọ dị, n'elu ụlọ ahịa ị nwere ike ịchọta seedlings nke lily osisi na, na-etinye ụfọdụ oge na ọrụ, na-eto eto mara mma ifuru. Ma ọ bụ osisi? Ka anyi ghota intricacies nke ugbo.
Ihe niile ịchọrọ ịma maka ịba ụba platicodone
Platicodone (mgbịrịgba China, ụda mgbịrịgba) - onye nnọchiteanya dị ogologo nke ezinụlọ ụlọ mgbịrịgba ahụ. Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahụ okooko osisi na amara ha. Iji mee ka ohuru ohuru na ohuru ohuru ha, otutu ndi oru ubi choro imuta uzo esi echebara uzo platicodon.
Ihe nzuzo nke na-eto eto seedlings nke Turkey na-elekọta na ubi na-elekọta
Ọchịchị Turkey na-ewu ewu na ndị na-elekọta ubi. Osisi a na-egbuke egbuke mara mma maka ogologo okooko ya na unpretentiousness. Ọchịchị Turkey na-ezo aka na osisi ornamental, nke pụtara na ọ chọrọ nlekọta pụrụ iche. Na-eto eto Turkey site na mkpuru osisi site na mkpụrụ osisi Carnation Turkish na-eto site na osisi na-eji usoro seedling.